क्रूजले केटीको जीबनमा धेरै कुरामा रोक लगाएका थिए !MediaNP News and Entertainment
Homeसमाजराजनीतिविश्वमनोरन्जनसूचना / प्रबिधिखेलकुदरोचक/बिचित्रPhoto-galleryVideoOnline FM A Annapurna Fm B B FM Baglung FM Bhorukawa FM Live buddhaawaaz fm बिग एफ.एम (BIG FM Live) Butwal fm live C Citizen Fm Live Classic FM Live D Dantakali FM live Dinesh FM Live K kalikafm liveकालिका एफ.एम Kanchanjungha FM Live M Mero Fm live Maitri-FM – Live mechitunes fm live N Nepal FM Nuwakot FM Nuwakot FM nepalikoradio fm P Pokhara FM Phoolbari FM Pathibhara FM primefm R Radio Krishnasar FM 94.0 MHz Radio Lumbini FM 96.8 MHz V Vijaya FM : from Nawalparasi I Image Fm Live ilamfm live ईलाम एफ.एम H Hits FM Live »अब २० सेकेण्डमै मोबाइल चर्ज हुने !
»भारतिय प्रधानमन्त्री असफल
»उत्तर कोरियाद्वारा चीनमा विशेष प्रतिनिध खटाइयो ।
»विपि स्मृति पार्कका आज अनावरण हुदै ।
You Are Here: Home » News » क्रूजले केटीको जीबनमा धेरै कुरामा रोक लगाएका थिए !	क्रूजले केटीको जीबनमा धेरै कुरामा रोक लगाएका थिए !
न्यूयोर्क, हलिउड अभिनेता टम क्रूजले केटी होम्सको जीवनमा धेरै कुरामा रोक लगाएको कुरा चर्चामा आएको छ । टमले केटीलाई उनका सह-कलाकारहरूसंग फोटो खिच्न तथा याहँसम्म कि उनीहरूसंग यात्रा गर्न समेत रोक लगाएका थिए ।
सूत्रहरूका अनुसार क्रूज (५०) ले होम्स माथि उनी यात्रा गर्दा सधै उनको निजी जेटको प्रयोग गर्न भन्दथे, ताकि उनका मानिसहरूले अभिनेत्री माथि निगरानी गरिरहन सकून । होम्सले जब फिल्म थ्याङ्क यू फर स्मोकिङ विद ऐरोन एखर्ट मा काम गरेकी थिइन, त्यसपछिनै यी दुबैले एक –अर्कोसंग समय विताउन शुरू गरेका थिए ।
ब्याटम्यान बिगिङ को निर्माणका बेला नै फिल्म टप गनमा मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेका क्रूजले होम्सलाइ उनका साथी कलाकारहरूका साथमा हवाई यात्रा गर्नमा रोक लगाएका थिए भनि सूत्रहरूले बताएका छन् । टम अभिनेत्रीका साथमा रोबोट जस्तो व्यवहार गर्दथे, टम होम्सको निजी जीवन र सार्वजनिक जीवनको प्रत्येक निर्णय आफैं लिन्थे । होम्स (३३) ले क्रूजसंग छुट्टिनका लागि सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिएकी छिन् ।
उनीहरू दुबैको सूरी नाम गरेकी एक छोरी पनि रहेकी छन् ।
श्रीलंकामा लगानि बढाउदै बिनोद चौधरी,७ करोड ५० लाख डलरको सिमेन्ट उद्योग खोल्ने
खासाबाट हुने आयत निर्यात ठप्प
आज विद्यार्थी दिवस।
चिनिया शिक्षामन्त्री हाओ पिङ नेपाल आउदै ।
दश केजी चरेससहित तीनजना पक्राउ
कमिसन खान आफै पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्दै निजि बिद्यालय ।
ग्यासका दुईथरि सिलिण्डिर असार देखि ।
Facebook Recent Posts:	अब २० सेकेण्डमै मोबाइल चर्ज हुने !